Meydka Muwaadin Soomaaliyeed oo la aqoonsan waayay oo laga helay Koofur Afrika | Dayniile.com
Home Warkii Meydka Muwaadin Soomaaliyeed oo la aqoonsan waayay oo laga helay Koofur Afrika
Meydka Muwaadin Soomaaliyeed oo la aqoonsan waayay oo laga helay Koofur Afrika
Waxaa Xaafadda Delf oo ka tirsan Magaalada Cape Town ee Koonfur Afrika laga helay Maydka Muwaadin Soomaaliyeed oo ila iyo hadda aan la aqoonsan eheladiisa iyo caddeymo kale oo muujinaya aqoonsigiisa.
Waxaana sida la sheegay uu marxuumka ku dhintay guri ay deggan yihiin Qoys koofur African ah, kuwaasi oo Soomaalida ku ganacsata Magaaladaasi u sheegay geeridiisa, waxaana ay intaas ku dareen in ay kor ka yaqaaneen oo kaliya, iyadoo magaciisa lagu soo koobay Maxamed Daahir.
Soomaalida dukaamada ku leh Tuulada Delf oo ka tirsan Magaalada Cape Town ee Koonfur Afrika ayaan ilaa iyo hadda garan Maydka marxuumka, waxaana ay intaas ku dareen baaritaan dheeraad ah aysameyn doonaan, iyagoo Booliska kaashanahaya, si loo aqoonsado halka uu ka yimid marxuumkaasi Soomaaliga ah ee ilaa hadda la garan la’yahay Maydkiisa.
Dalka Koofur Afrika ayaa waxaa ku ganacsada Soomaali aad u tiro badan, kuwaasi oo ku leh ganacsiyo waa weyn, waxaana sidoo kale jira dhibaatooyin kala duwan oo ay la kulmaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool, waxaana joogta ka ah dilalka iyo dhaca loo gaysto Soomaalida.
Previous articleSoomaaliya iyo Shiinaha oo ka wada hadlay horumarinta ciidanka
Next articleLiverpool Oo Guul Kasoo Gaartay Atletic, Klopp ayaa soo afjaray Musalsalkii Wanda Metropolitano
Madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa dedaalkasta ku bixiyay sidee Wasiir Dubbe, loogu ciqaabi lahaa in uu u hogaansamo amarkii Raysalwasaare Rooble ee wararka Madaxweynaha...
Hey’adda Xuquuqul Insaanka Itoobiya oo sheegtay in dalkaasi lagu diley dad...